खर्च र आम्दानीको हिसाब गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी खर्च र आम्दानीको हिसाब गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा
on: २३ भाद्र २०६९, शनिबार ००:०० रोजगारी
खर्च र आम्दानीको हिसाब गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा
वैदेशिक रोजगारीको २ देखि ३ वर्षको अवधिमा कति कमाउँछु भन्ने जानकारी लिनु उपयुक्त हुन्छ । हाल नेपाली कामदारहरु पनि धेरै पैसा तिरेर जाँदा राम्रो काम तथा कमाइ हुन्छ भन्ने सोचाइबाट ग्रसित छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानूपूर्व आफुले पाउने तलबका बारेमा राम्रोसँग जानकारी लिनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि स्वदेशमा म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने रकम तथा रोजगारीमा गइसकेपछि आफुले कमाउने पैसाबीच तुलना गरेर मात्र जानु पर्दछ । म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको रकम वैदेशिक रोजगारीमा गएर कति महीनामा कमाइन्छ भन्ने हिसाब गर्नु पर्दछ । यदि हिसाब नगरी हचुवाको भरमा जाँदा कमाएको पैसाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको पैसा उठाउन पनि कठिन हुन्छ । अझ साहूसँग ऋण लिएर गएको अवस्थामा त्यसको ब्याजको समेत हिसाब गर्नु पर्दछ । प्रचलित चलन अनुसार ३६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा मात्र ऋण पाइन्छ । रू. १ लाख ऋण लिएमा ब्याजबापत मात्र साहूलाई वार्षिक ३६ हजार रुपैयाँदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनु पर्दछ ।
विशेषगरी मलेशिया, कतार तथा साउदी अरबको रोजगारीमा जाँदा यस्ता कुराको जानकारी लिनु आवश्यक पर्दछ । मलेशियाको रोजगारीमा जाँदा म्यानपावर कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा बुझाउनु पर्दछ । तर, मलेशियाको रोजगारीमा गएर दैनिक आठ घण्टा काम गर्दा मासिक सुक्खा ५ सय ४६ रिङ्गिट अर्थात् (करीब रू. साढे १५ हजार) कमाइ हुन्छ । यस्तो काममा जाँदा ओभर टाइमको सुविधा नभएमा कमाएको पैसाले खान र सामान्य मनोरञ्जन गर्नका लागि मात्र ठीक हुन्छ । मलेशियको रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य ओभरटाइम सुविधा भए÷नभएको पूर्ण जानकारी लिनु पर्दछ । मलेशियाको रोजगारीमा जाँदा ओभरटाइमको सुविधा नभएमा जानु उपयुक्त हुँदैन । मलेशियामा काम गर्न सजिलो भए पनि खासै कमाइ नहुने श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव विनोद केसी बताउँछन् । ‘नेपाली कामदारहरू मलेशियामा खानाविनाको काममा जान्छन्,’ उनले भने, ‘खान बस्नको सुविधा नभएको काममा जाँदा खासै कमाइ हुँदैन ।’ मलेशियाको रोजगारीमा गएर ३ वर्षमा फर्किंदा कामदारले मुश्किलले डेढ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म ल्याउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
धेरै लागतमा थोरै कमाइ हुने काममा रोजगारीका लागि जान नहुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ बताउँछन् । कतिपय कामदारहरू विदेश पुग्ने रहरले मात्र पनि रोजगारीमा जाने गरेका छन् । हचुवाको भरमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यस्ता कामदारले दुःख पाउने उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीको २ देखि ३ वर्षको अवधिमा कति कमाउँछु भन्ने जानकारी लिनु उपयुक्त हुन्छ । हाल नेपाली कामदारहरू पनि धेरै पैसा तिरेर जाँदा राम्रो काम तथा कमाइ हुन्छ भन्ने सोचाइबाट ग्रसित छन् । तर, फ्री भिसा तथा फ्री टिकटमा जाँदा राम्रो काम पाइने उनी बताउँछन् । ‘विदेशका ठूला तथा राम्रा कम्पनीले दक्ष कामदार लैजान चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि रोजगारदाता कम्पनीले भिसा तथा टिकट फ्री दिन्छन् ।’
त्यस्तै, साउदीको रोजगारीमा जाँदा सामान्य मजदूरका लागि न्यूनतम तलब ६ सय रियाल दिने गरेको छ । त्यस्ता खालको काममा जाँदा पनि राम्रो कमाइ हुँदैन । खर्च र आम्दानीको हिसाब नै नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कतिपय कामदारहरू २÷३ वर्षसम्म काम गर्दा पनि त्यत्तिकै फर्कन बाध्य हुने गरेका छन् ।
खर्च कम गर्न एजेण्टको भर नपर्ने
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा प्रायः जसो कामदारहरू एजेण्टमार्फत जाने गरेका छन् । यसरी जाँदा बढी शुल्क तिर्नु पर्दछ । एजेण्टहरूले म्यानपावर कम्पनीमा पु¥याएबापत न्यूनतम १० हजार रुपैयाँदेखि २५÷३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन्छन् । यसरी एजेण्टलाई बढी रकम तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीसँग नै सम्पर्क गरी जानु उत्तम मानिन्छ । म्यानपावर व्यवसायीले पनि सोझै आएका कामदारलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । उनीहरूले त्यस्ता कामदारलाई अफिस रेटअनुसार न्यूनतम लागत खर्चमा नै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेका छन् ।